६ विद्यार्थीका लागी ३ शिक्षक !
By Buddha Nepali
असोज २३, सिन्धुली
विद्यालयमा कतिसम्म पढाई हुन्छ ? 'कक्षा पाँच सम्म ।' कति जना शिक्षक छन् ? '३ जना ।' विद्यार्थी कति छन् ? '६ जना ।' तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला हैन ? नपर्नु पनि कसरी प्रावि स्तरको विद्यालयमा जम्मा ६ जना विद्यार्थी विद्यालयमा पढ्न आउँछन् तर शिक्षाक भने ३ जना छन् ।
विद्यालयको बाहिरी वातावरण र भौतिक संरचना हेर्दा यस्तो लाग्छ विद्यालयमा सयैंको हाराहारीमा विद्यार्थी विद्यालय पढ्न आउछन्। सयैंको हाराहारीमा विद्यार्थी अट्न सक्ने शैक्षिक पूर्वाधार प्रशस्तै छन । पढ्न र पठाउन आवश्यक पर्ने डेसबेन्च,बोर्ड, शौचालय, लगाएत केही शैक्षिक सामाग्री विद्यालयमा छन् । बर्सेनीजसो राज्यको लाखौं लगानी पनि बढिरहेको छ ।
प्राविस्तरको विद्यालयमा बाल विकास केन्द्रमा ३ जना र कक्षा एक देखि ५ सम्म मात्र ३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यालयमा शिक्षक भने ३ जना छन् । सुन्दा अचम्म र अनौठो लाग्ला तर पनि विगत २।३ वर्षदेखि विद्यालयको अवस्था यस्तै छ । कमलामाई नगरपालिका –२ बेसारेमा रहेको श्री ठाकुर प्राथामिक विद्यालय बेसारे,सिन्धुलीको अवस्था अहिले यस्तै छ। विद्यालयमा छ जना विद्यार्थी नियमित रुपमा पढन आउँछन् । छ जना विद्यार्थीका लागि राज्यले ३ जना शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्र गरिदिएको छैन करौडौको संरचना पनि ठडाइदिएको छ ।
विद्यालयमा एक जना दरबन्दी, एक जना राहत र एक जना बाल विकास केन्द्रका शिक्षक गरी ३ जना शिक्षक छन्। ६ जना विद्यार्थीलाई तिनै शिक्षकले पढाइरहेका छन् ।विद्यालयले नगरपालिकामा दिएको विवरण अनुसार विद्यालयमा शिशु कक्षामा २ जना छात्रा,एक जना छात्र, कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्म तिन जना छात्रा मात्र विद्यालय आउने गर्छन् ।
विगत २।३ वर्षदेखि उक्त विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ । अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भर्ना हुन आउने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुमित्रा कुमारी आचार्यले जानकारी दिए। प्रधानाध्यापक आचार्यले विद्यालयमा भर्ना १५ जना विद्यार्थी भएको र पढनका लागि थोरै आउने गरेको बताउनुभयाे ।
पछिलो समय जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था विद्यार्थी बिहीन बन्दै गइरहेको छ । कमलामाई नगरपालिकामा मात्रै न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालय पाँचवटा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त न्यून भएपछि केही वर्षदेखि मर्जको कुरा चले पनि पुरा नभएको र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको प्रअ आचार्यले बताउनुभयाे । १ किलो मिटर दूरीमा प्रावि तहको विद्यालय स्थापना हुनु, निजी विद्यालय खोलिनुले विद्यार्थी संख्या कम भएको उनले दावी गर्नुभयाे ।
विद्यालय स्थापनाकालमा विद्यार्थी संख्या राम्रै रहेको थियो। पछिल्लो समयमा मात्रै शिक्षक र विद्यार्थी बराबर जस्तो हुन थालेका हुन् । विद्यालयलाई अन्य विद्यालयसँग मर्ज गर्ने तयारी गरिएको वडा नम्बर – २ का वडाअध्यक्ष नवराज थिङले जानकारी दिनुभयाे । विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम भएकाले नजिकका विद्यालय गाभ्नुपर्ने अवस्था आएको थिङले बताउनुभयाे ।
नगरपालिकाको थाक्लेफेदी, बाल्दिङ, पचभैया, सुनडाँडा हात्तीगौडामा रहेका विद्यालयहरुको अवस्था पनि यस्तै छ । नगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक धु्रव प्रसाद कोईरालाले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयहरु पहिचान गरेर प्रभावकारी उपाय खोजिने बताउनुभयाे ।